Rajada shacabka Muqdisho kadib shirki Istanbul (Warbixin + Sawiro)
Updated About:350 days ago 0
Shanti maalin ee lasoo dhaafay guuxa iyo ra’yul caamka guud ee shacabka Muqdisho waxa uu ku saabsanaa Shirki Istanbul iyo rajada laga qabo waxa uu ka badali karo Soomaaliya.
Inta badan dadka Muqdisho waxay wada doonayaan in ay helaan nabad iyo dowladnimo sax ah oo dariiq wanaagsan ku hogaamisa dalka iyo dadka, sidaasi daraadeed shir walba oo Soomaalia loo qabta waxay ka sugaan wax wanaagsan.
Laakin shirirki kala duwanaa ee tan iyo 1991-ki dalalka caalamka loogu qabanayey dalka dibadiisa ma jirin rjaooyin wanaagsan oo kasoo if baxay, ha yeeshee markan waxa dadku ay u badanyihiin in xaaladu ay ka duwanaan doonto Turkiguna uu ka dhabeyn doono balan qaadkiisa ah in Soomaaliya uu ku ridi doono wadada nabada.
Hadaba Faaduma Axmed Maxamed oo ah hooyo 37 jir ah ayaa ka mid ah dadka rajada ka qabo in Soomaaliya ay mar’un cagaheeda isku taagto kana baxdo fowdada iyo dagaalada.
Maama Faduma waa hooyo caruur waxaana ay sharaxeysaa nolosha ay ku nooshaya oo ay ku sheegtay mid isugu jirto rajo iyo cabsi.
Waxay iibisaa qudaar, iyo cabitaan qaboow iyada oo ku jirto mid ka mid ah xeryaha magaalada Muqdisho si caruurteeda noloshooda ay u maareyso.
Caruurteeda waxay ka koobantahay 10, sideed ka mid ah iyada ayaa dhashay laba kalana waxay u tahay eedo oo walaalkeed oo ku dhintay duqeymaha Muqdisho sanadki 2009 ayaa dhalay, sidaasi daraadeed waa in ay korisaa.
“Aniga markeeygi hore waxaan ka imid Shabeelaha Hoose koonfurta Soomaaliya, lixdi sano ee lasoo dhaafay waxaan uguurayey meelba meel, dhowr jeer ayaan barakacay ugu danbeyn sanadki 2009 ayaan dagay xeradaan ku taala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, walina waan daganahay, rajada kaliyah ee aan waa in caruurteyda ay heshaa nolo fiican gaar ahaan waxbarasho taasina waxaan ku heli karnaa dowlad wanaagsan oo taam ah,” ayey tiri.
Faaduma oo sheekadeeda sii wadata ayaa sheegeysa in ninkeeda uusan heysan wax shaqa ah, badanaa wuxuu iska joogaa guriga isaga oo aanan waxba qabaneyn mararka qaarna tukaanka ayuu iga caawiyaa oo uu ila gadaa, gabadheyda curudka ah oo ah 13 jir ah ayaa caruurta ii xanaaneysa ayey tiri.
“Aroorta hore maalin walbaa waan dheelmadaa waxaana aadaa suuqa si aan usoo gato alaabaheyga kadibna waxaan kusoo laabtaa guriga si aan u diyaariyo wixi aan tukaanka ku gadi lahaa sida sanbuuska, burka iyo wixyaabaha kale, kadib waxaan ka iibiyaa dadka dariska ah maalinti oo dhan waan shaqeeyaa ILLAAH ayaa mahad ku leh waxyaabahaasi yar yar ayaan ka helaa quutul yoonkeeyga,” ayey tiri.
“Inkastoo aan rajo wanaagsan qabno oo xaga nabada ah hadana aniga oo tukaankeyga jooga ayaan waxaan maqlaa daryanka qaraxyada maraka qaar ka dhaca Muqdisho waxaana u baqaa dadka kale iyo caruurteyda,”
Mararka ay madaafiicda soo dhacayaan ilmaha waan la ordaa waxaana la aadaa guryaha shubka ka sameysan ee aysan madaafiicda karin ee dariskeyga ah, aniga gurigeyga waa jiingad oo waxaan daganahay xero, mararka qaar waxaa dhacda inta aan maqanahay in guriga ay tuuga soo gasho.
Laakin xiligaan amaanka guud wuxuu u muuqdaa mid soo hagaagaya waayo waxaan aadi karnaa guud ahaan Muqdisho oo dhan sida Bakaaraha, Suuq Bacaad, Xamar Weyne, Madina iyo meelo kal inkastoo mararka qaarna ay dhacaan qaraxyo.
Waagii nabada dalka Soomaaliyana uu ku jiray xasiloonida nolosha way fududeyd, dadku waxay ahaayeen kuwo isku filan oo lacago heysta, haatan hadii xitaa shaarkaada kuu cadyahay lacago noloshu waa ciriir mana lahan shaqo.
Ugu danbeyntii ma garan karno sida ay xaaladu noqon doonto hase yeeshee rajadeena ugu weyn ayaa ah sidi marun aan u heli laheyn dowlad noo horseedo cadaalad, barwaaqo, sinnaan iyo horumar.